Kiwi နဲ့ စတော် ပေါင်းစပ်သော် – Sangria | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Food, Drink & Recipes » Kiwi နဲ့ စတော် ပေါင်းစပ်သော် – Sangria	12
Kiwi နဲ့ စတော် ပေါင်းစပ်သော် – Sangria
Posted by ဇီဇီ on Mar 26, 2016 in Food, Drink & Recipes, How To.., Photography, Society & Lifestyle | 12 comments
Sangria အကြောင်းး သိကောင်းစရာ
နက်ဖန် စနေည ကို အိမ်မှာ စမ်းချင်သူများးရှိရင် စမ်းသပ်နိုင်အောင် တင်ပေးးလိုက်တာပါ..
တညားးလည်းး ခုမှ စမ်းးရင် မူးးမူးးနဲ့ ရေးးလိုက်ပါတယ်..
Kiwi & Strawberry Sangria
၁) ကီဝီ – ၃ လုံးးး
၂) စတော်ဘယ်ရီ အကြီးး – ၂၀ လုံးး
၃) Rum – ဖန်ခွက် အရှည် တစ်ဝက်
၄) White wine – ၂ ဖန်ခွက်
၅) သကြား – ထမင်းစားဇွန်း ၃ ဇွန်း
၆) သကြားရည် – ဖန်ခွက် တစ်ဝက်
၇) ဖန်ချိုင့် – ၂ လီတာဝင် ဖန်ချိုင့် ၁ ခု
၈) ကမ္ဗလာသီး – ၃ လုံး
၁) စတော်ဘယ်ရီ ၁၀ လုံးခန့် ကို အညှာ ချွေ သကြား ၃ ဇွန်းထည့် ရေမြုတ်ရုံ ပြုတ်ပါ.. ကြေလာချိန်တွင် စကာနဲ့ တိုက်ပြီးး စတော်ဘယ်ရီရည် ယူထားပါ. အအေးခံထားးပါ..
၂) ကမ္ဗလာသီး ကို အရည် ညှစ်ယူထားပါ..
၃) Jug ထဲကို ကီဝီသီးး ပါးးပါးးလှီးးထည့်.. စတော်ဘယ်ရီ၁၀ လုံး ထက်ခြမ်းခြမ်းထည့်ပါ…
၄) ကမ္ဗလာရည်, စတော်ဘယ်ရီရည်, စပါကလင်, ရမ်, ဝိုင် အဖြူတို့ ကို အချိုးးအတိုင်း ထည့်မွှေကာ ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် ၄ နာရီကြာ ထားးပြီးး သောက်သုံးးနိုင်ပါပြီ…
ပြုလုပ်နည်း ကို ပုံ တစ်ပုံချင်းစီ ရှုပါ…
ဖွဘုတ်ထဲက Tasty ပေ့ခ်ျကနည်း ကို စမ်းးပြီးး အချိုးးချထားးပါတယ်..
ရမ်ပုလင်း နဲ့ ကမ္ဗလာသီး
စတော်ဘယ်ရီတွေ အညှာခြွေ ထက်ခြမ်းးခြမ်းပါ
ထက်ခြမ်း ခြမ်း ထားးတဲ့ ခပ်ပျော့ပျော့ ၁၀ လုံး ကို သကြား ၃ ဇွန်းထည့်ပြီးး မီးဖိုပေါ်တင်ပါ.. ရေမြုတ်ရုံ ထည့် အဖုံးးအုပ်တည်ပါ
အရည်တွေပွက်ပြီးး စတော်ဘယ်ရီတွေ ခြေလို့ ရချိန်မှာ ဇကာနဲ့တိုက် အရည်စစ်ပြီးး အအေးးခံထားးပါ..
ကမ္ဗလာရည်နဲ့ စတော်ဘယ်ရီချက်ရည် အသင့်
ဖန်ချပ်ထဲ ကို ကီဝီပါးးပါးးလှီးးထည့် ကျန်တဲ့ စတော်ဘယ်ရီ ခပ်တင်းးတင်းးခြမ်းးထားးတာလေးးထည့် သကြား ၅ ဇွန်းဖျော်ထားတဲ့ ဖန်ခွက် တစ်ဝက် သကြားရည် ထည့်မယ် ဝိုင်ဖြူ ၂ ဖန်ခွက် ထည့်မယ်.. ရမ် ဖန်ခွက် ဝက် ထည့်မယ်.. ခုန က အရည် ၂ မျိုးးထည့်မယ်..
အားလုံးရောပြီးရင် မွှေပြီးး အဖုံးးဖုံးး ၄ နာရီကြာ ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ထားးပါ.
၄ နာရီကြာရင် သောက်လို့ရပါပြီ.
ရီဝေဝေဖစ်တာ က နောက်မှ..
အဝင်ကောင်းးလွနိးးလို့ သောက်မိတာ အရင်ပါ..
နောက်ရက် မှ နောက်တမျိုးး စမ်းးထားးတာ တင်ပါ့မယ်..
ဦးကြောင်ကြီး says: နပေါသီးပါ အကွင်းလေးတွေလှီးပီး ရောထည့်ရတယ် ဝှီဂါမရဲ့။
ခင်ဇော် says: ဥကြောင်ဆီက ငပေါဒီးးကိုပဲ
Thint Aye Yeik says: .ကြည့်ရတာနဲ့ကို မူးသွားပါပြီမမဂျီး
ခင်ဇော် says: အမာ..
လုံမလေးမွန်မွန် says: အာ့သောက်ရဖို့ မမဂျီးပြန်လာတဲ့ထိ စောင့်ရမာလားဟင်င်..
ဟိုတစ်ယောက်နဲ့ဆို အဖော်စပ်လို့ရမှာ မဟုတ်ပုစ်လေ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခင်ဇော် says: ငင်.. ဟို အဖွဲ့တွေ က ဘာလုပ်ဖို့ ထားးတုန်းးး
kai says: ကျန်းမာရေးအတွက်တော်တော်ကောင်းမယ့်ပုံ…။
၀ယ်သောက်လည်း.. ဈေးက ခေမယ်မဟုတ်..။
ပုံထဲ.. ဂလု.. ရျလွတ်သာလုပ်သွားကြောင်း…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခင်ဇော် says: ရမ် ပါတော့ ပူတယ်ဗျ..
ဒီနေ့ နောက် တစ်မျိုးး စမ်းးနေတယ်..
ထမင်းဆိုင် မဖွင့် နိုင်သေးတုန်းးး
သောကြာည ဘက် ဗဲဗရေ့ခ်ျ တင်ပေးးမယ်… ခွီးးးး
နာ့ထက် ပျင်းတဲ့ သူနဲ့ တွေ့နေတယ်..
naywoon ni says: ဒီအယက်​သမ နဲ့​တော့ ခက်​ကပြီ ။ ဒီမှာက အယက်​ ​သောက်​လို့မရ လို့ပါစို တူဂ သ​ရေ ကျ​အောင်​ လာလာပျ​နေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခင်ဇော် says: ဟုလားးး
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: ဘီအီးနဲ့ သရက်သီးနဲ့ လဲ ရတယ်တဲ့ဗျ
ခင်ဇော် says: ရို့ရို့.. နောက်တနည်းး က ပိုလွယ်မယ်ထင်တယ်….